Chineke na-ekulite onye ọ na-enweghị ka ọ hà ya
Ka e too aha Jehova ruo ebighị ebi (2)
Chineke na-ehulata (6)
113 Toonụ Jaa!* Unu ndị ohu Jehova, toonụ ya. Toonụ aha Jehova. 2 Ka e too aha Jehova Malite ugbu a ruo mgbe ebighị ebi.+ 3 Ka a na-eto aha Jehova+Malite n’ọwụwa anyanwụ ruo n’ọdịda anyanwụ. 4 Jehova dị elu karịa mba niile.+ Ọ dị ebube karịaeluigwe.+ 5 Ònye dị ka Jehova Chineke anyị,+Onye bi* n’ebe dị elu? 6 Ọ na-ehulata ka o lee eluigwe na ụwa anya.+ 7 Ọ na-esi n’ájá ekulite onye ọ na-enweghị ka ọ hà ya. Ọ na-esi n’ebe a na-ekpofu ntụ* ekulite ogbenye,+ 8 Ka o wee mee ka o soro ndị a ma ama nọrọ,Bụ́ ndị a ma ama ná ndị Chineke. 9 Ọ na-eme ka obi dị nwaanyị aga ụtọMaka na ọ mụtala ụmụ n’ụlọ ya.+ Toonụ Jaa!*
^ Ma ọ bụ “Haleluja!” “Jaa” bụ mkpọbiri aha Jehova.
^ Ma ọ bụ “nọ n’ocheeze.”
^ O nwere ike ịbụ, “ahịhịa.”